Nampirisika ny ONU hanambara Andro iray ho an'ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Nampirisika ny ONU hanambara Andro iray ho an'ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana
Septambra 22, 2021 Vaovao sy hevi-dehibe, Opinion 0
(Navoaka avy amin'ny: InDepthNews. 21 septambra 2021)
Nosoratan'ny masoivoho Anwarul K. Chowdhury
Ity manaraka ity ny lahatsoratry ny kabary fanokafana voalohany nataon'ny ambasadaoro Anwarul K. Chowdhury, sekretera jeneraly lefitra teo aloha ary solontenan'ny Firenena Mikambana ary mpanorina ny The Global Movement for The Culture of Peace (GMCoP), tamin'ny Fihaonamben'ny Fampianarana fihavanana voalohany isan-taona nokarakarain'ny The Unity Foundation sy ny Peace Education Network.
NEW YORK (IDN) - Misaotra an'i Bill McCarthy aho, filoha sady mpanorina ny Unity Foundation ary filohan'ny Fihaonamben'ny Fampianarana ny fandriam-pahalemana voalohany sy ny tambajotra Peace Education Network tamin'ny fikarakarana ny kaonferansa miaraka amin'ny tanjona tsara hahatonga ny ONU hanambara fandriampahalemana iraisam-pirenena. Andro fanabeazana. Mino aho fa tsara kokoa raha antsoina hoe Andro Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana.
Voninahitra ho ahy ny fanasana ahy hiteny mandritra ny fihaonambe amin'ny maha mpandahateny fototra ho an'ny lohahevitra iray izay tena akaiky ny foko sy ny persona.
Araka ny efa nambarako tamina fotoana maro, ny zavatra niainako teo amin'ny fiainako dia nampianatra ahy hanome lanja ny fandriampahalemana sy ny fitoviana amin'ny maha zava-dehibe ny fisiantsika. Ireo dia mamoaka ny herin'ny tsara izay ilaina tokoa amin'ny fivoaran'ny olombelona.
Ny fandriam-pahalemana dia mifamatotra amin'ny fisian'ny olombelona - amin'ny zavatra rehetra ataontsika, amin'ny zavatra rehetra lazaintsika ary amin'ny eritreritra rehetra ananantsika, dia misy toerana ho an'ny fandriampahalemana. Tsy tokony hampisaraka ny fihavanana amin'ny zavatra misaraka na lavitra isika. Zava-dehibe ny fahatsapana fa ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana dia manaisotra ireo fotoana ilaintsika hanatsarana ny tenantsika, hanomanana ny tenantsika, hanomezana hery ny tenantsika hiatrika ireo fanambin'ny fiainantsika, na amin'ny isam-batan'olona na amin'ny fiaraha-miasa.
Nandritra ny roapolo taona sy tapany, ny fifantohako dia ny fampivoarana ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana izay mikendry ny hahatonga ny fandriampahalemana sy ny tsy herisetra ho ampahany amin'ny tenantsika manokana, ny toetrantsika manokana - ampahany iray amin'ny fisiantsika olombelona. Ary izany dia hanome hery ny tenantsika handray anjara amin'ny fomba mandaitra kokoa hitondra fandriampahalemana anaty sy ivelany.
Io no fototry ny refy fanovan'ny tena momba ny fanoloran-tenako manerantany sy amin'ny sokajin-taona rehetra, miaraka amin'ny fanamafisana manokana ny vehivavy, ny tanora ary ny ankizy. Ity fahatsiarovan-tena ity dia nanjary nanjary manan-danja kokoa teo afovoan'ny fitomboan'ny tafika sy ny miaramila izay manimba ny planetantsika sy ny olontsika.
Ny kongresy iraisam-pirenena momba ny fandriam-pahalemana ao an-tsain'ny olona dia natao tao Yamoussoukro, Côte d'Ivoire / Ivory Coast tamin'ny 1989 nokarakarain'ny UNESCO teo ambany fitarihana hendry sy mavitrika nataon'ny namako malalako Federico Ben'ny tanàna Zaragoza, avy eo ny Tale jeneralin'ny UNESCO izay miditra ao fihaonambe ihany koa amin'ny maha mpandaha-teny azy. Fihaonana manan-danja io mba hanomezana tombony sy fampahafantarana ny foto-kevitry ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana mikendry ny hampiroborobo ny soatoavina sy ny fitondran-tena.
Tamin'ny 13 septambra 1999, 22 taona lasa izay, tamin'ny herinandro lasa teo, ny Firenena Mikambana dia nandray ny Fanambarana sy programa momba ny hetsika momba ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana, antontan-taratasy goavambe izay mihoatra ny fetra, kolontsaina, fiaraha-monina ary firenena.
Voninahitra ho ahy ny nitarika ny fifampiraharahana naharitra sivy volana izay nanjary nanjary noraisin'ny United Nations General Assembly ny antontan-taratasy manan-tantara. Io antontan-taratasy io dia manamafy fa ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana dia karazana soatoavina, fomba fitondran-tena ary fomba fiaina.
Lafiny iray manan-danja amin'ny hafatra ilaina araka ny voalaza ao amin'ny antontan-taratasy UN izay manamafy fa ny "kolontsain'ny fandriam-pahalemana dia dingan'ny fanovana tsirairay, fiaraha-monina ary andrim-panjakana…" Ny 'fanovana' no tena ilaina eto.
Ny votoatin'ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana dia ny hafatry ny firaisan-kina sy ny firaisankina manerantany.
Fototra ny fitadidiana fa ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana dia mitaky fanovana ny fontsika, fiovan'ny toe-tsaintsika. Izy io dia azo ampidirina amin'ny alàlan'ny fomba fiainana tsotra, fanovana ny fitondrantenantsika manokana, fanovana ny fifandraisantsika tsirairay, fanovana ny fifandraisantsika amin'ny maha-iray ny zanak'olombelona. Ny votoatin'ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana dia ny hafatry ny firaisan-kina sy ny firaisankina manerantany.
Ny fandaharam-pianarana 2030 ho an'ny fampandrosoana maharitra ny Firenena Mikambana amin'ny tanjona fampandrosoana maharitra (SDG) laharana 4.7 dia ahitana, ankoatry ny hafa, ny fampiroboroboana ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana sy ny tsy herisetra ary koa ny zom-pirenena manerantany ho ampahan'ny fahalalana sy ny fahaiza-manao ilaina hampiroboroboana maharitra fampandrosoana.
Miantso ny fianakaviambe iraisam-pirenena ihany koa izy io mba hiantohana ny fahazoan'ny mpianatra rehetra izany amin'ny taona 2030. Mifantoka hatrany amin'izany, ny lohahevitry ny UN High Level Forum amin'ny taona 2019 mankalaza ny faha-20 taonan'ny kolontsain'ny fandriampahalemana ao amin'ny ONU dia ny "The Culture momba ny fandriam-pahalemana — Fampaherezana sy fanovana ny maha-olombelona ”mikendry fandaharam-potoana mandroso sy manome aingam-panahy mandritra ny roapolo taona ho avy.
Amin'ny fampidirako ny famoahana 2008 "Fampianarana fandriam-pahalemana: làlan'ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana", Nanoratra aho hoe: "Araka ny nolazain'i Maria Montessori araka ny tokony ho izy, ireo izay maniry fomba fiaina mahery setra dia manomana ny tanora amin'izany; fa ireo izay maniry fandriam-pahalemana dia nanao tsirambina ny zanany kely sy ny zatovo ary izany fomba izany dia tsy afaka nandamina azy ireo ho amin'ny fandriam-pahalemana. ”
Ao amin'ny UNICEF, ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana dia faritana mazava tsara amin'ny hoe "ny dingan'ny fampiroboroboana ny fahalalana, ny fahaiza-manao, ny fihetsika ary ny soatoavina ilaina amin'ny fanovana ny fihetsika izay ahafahan'ny ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe misoroka ny fifandonana sy ny herisetra, na amin'ny tampoka na amin'ny rafitra; hamaha ny fifanolanana am-pilaminana; ary mamorona fepetra ahafahan'ny fandriam-pahalemana, na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, na antokon'olona, ​​na firenena na iraisam-pirenena ”.
Ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia mila ekena amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao, amin'ny fiarahamonina sy ny firenena rehetra ho singa iray lehibe amin'ny famoronana ny kolontsain'ny fandriampahalemana.
Ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia mila ekena amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao, amin'ny fiarahamonina sy ny firenena rehetra ho singa iray lehibe amin'ny famoronana ny kolontsain'ny fandriampahalemana. Mendrika fanabeazana hafa tanteraka izy io- "iray izay tsy mankalaza ady fa manabe ho an'ny fandriampahalemana, tsy herisetra ary fiaraha-miasa iraisam-pirenena." Mila ny fahaiza-manao sy fahalalana izy ireo hamoronana sy hikolokoloana ny fandriam-pahalemana ho an'ny tenany manokana ary koa ho an'izao tontolo misy azy ireo.
Tsy mbola zava-dehibe kokoa amintsika ny mianatra momba an'izao tontolo izao sy mahatakatra ny fahasamihafana misy eo aminy. Ny laharam-pahamehana dia ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora hahita fomba tsy mahery setra hifandraisana.
Ny andrim-pampianarana rehetra dia mila manolotra fotoana hanomanana ny mpianatra tsy hiaina fiainana mahafa-po fotsiny fa ho olom-banona tompon'andraikitra, mahatsiaro tena ary mamokatra eto amin'izao tontolo izao koa. Ho an'izany, ny mpampianatra dia mila mampiditra fandaharam-pianarana holistic sy manome hery izay mamboly kolotsaina fandriam-pahalemana ao an-tsaina ny tanora tsirairay.
Tokony hantsoina amin'ny fomba mety kokoa izany "Fanabeazana ho an'ny zom-pirenena manerantany". Ny fianarana toy izany dia tsy ho tratra raha tsy misy fanabeazana fandriam-pahalemana voadinika tsara, maharitra ary mitarika izay mankany amin'ny kolontsain'ny fandriampahalemana.
Raha azo oharina amin'ny solosaina ny saintsika, dia ny rindrambaiko ny fanabeazana mba hamerenana amin'ny laoniny ny laharam-pahamehana sy ny hetsika ataontsika lavitry ny herisetra, mankany amin'ny kolontsain'ny fandriampahalemana. Ny fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana dia nanohy nandray anjara tamin'ny fomba iray manan-danja amin'io tanjona io ary tsy maintsy mahazo ny fanohanantsika tsy tapaka.
Raha azo oharina amin'ny solosaina ny saintsika, dia ny rindrambaiko ny fanabeazana mba hamerenana amin'ny laoniny ny laharam-pahamehana sy ny hetsika ataontsika lavitry ny herisetra, mankany amin'ny kolontsain'ny fandriampahalemana. Ny fampielezan-kevitra eran-tany ho an'ny fandriam-pahalemana dia nanohy nandray anjara tamin'ny fomba manan-danja amin'io tanjona io ary tsy maintsy mahazo ny fanohananay hatrany.
Noho izany dia mino aho fa ny fahazazana dia manome fotoana tsy manam-paharoa hananantsika voa hafafy amin'ny fifandimbiasana avy amin'ny kolontsain'ny ady ka hatramin'ny kolontsain'ny fandriampahalemana. Ny zava-mitranga iainan'ny zaza amin'ny fahazazany, ny fanabeazana azon'ity zaza ity, ary ny fiaraha-mientana eo amin'ny fiaraha-monina sy ny toe-tsaina ara-tsosialy sy kolontsaina izay nandraisana zaza iray dia nandray anjara tamin'ny fomba ahoana ny soatoavina, ny fomba, ny fomban-drazana, ny fomba fitondran-tena ary ny fomba fiainana mivoatra.
Mila mampiasa an'ity varavarankely misy ny fotoana ity isika mba hampiorenana ireo rudiment izay ilain'ny tsirairay ho tonga mpiasan'ny fandriampahalemana sy tsy herisetra hatramin'ny fahazazany.
Mampifandray ny andraikitry ny tsirairay amin'ny tanjona lehibe manerantany, ny Dr. Martin Luther King Junior dia nanamafy fa "ny olona iray dia tsy nanomboka niaina mandra-pahatongany eo ambonin'ny fetra tery amin'ny ahiahiny manokana momba ireo olana lehibe kokoa ananan'ny zanak'olombelona rehetra." Ny Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana momba ny hetsika momba ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana dia mandinika manokana an'io lafiny fanovana ny tena io.
Amin'ity toe-javatra ity dia averiko ihany fa ny vehivavy manokana dia manana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana eo amin'ireo fiarahamonintsika izay iharan'ny herisetra, amin'izay hitondra fandriampahalemana sy fampihavanana maharitra. Ny fitovian'ny vehivavy dia mahatonga ny planetantsika ho azo antoka sy azo antoka. Mino mafy aho fa raha tsy miroso amin'ny fampiroboroboana ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana ny vehivavy amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny lehilahy, dia hitohy tsy ho azontsika ny fandriampahalemana maharitra.
Tokony hotadidintsika foana fa raha tsy misy fandriampahalemana dia tsy azo tanterahina ny fampandrosoana ary raha tsy misy ny fampandrosoana dia tsy azo tanterahina ny fandriam-pahalemana, fa raha tsy misy ny vehivavy, na fandriampahalemana na fampandrosoana dia tsy azo eritreretina.
Ny asa ho an'ny fandriam-pahalemana dia dingana mitohy ary resy lahatra aho fa ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana no tena fitaovana ilaina indrindra hanatanterahana ny tanjona sy ny tanjon'ny Firenena Mikambana tamin'ny taonjato fahiraika amby roapolo.
Avelao aho hamarana amin'ny alàlan'ny famporisihana mafy indrindra anareo rehetra fa mila mamporisika ny tanora hanana ny tenany izy ireo, hanangana ny toetrany manokana, ny toetrany manokana, izay mifamatotra amin'ny fahatakarana, fandeferana ary fanajana ny fahasamihafana ary firaisan-kina miaraka amin'ny zanak'olombelona sisa rehetra. .
Mila mampita izany amin'ny tanora isika. Ity no kely indrindra azontsika atao rehefa olon-dehibe. Tokony hanao ny zava-drehetra isika mba hanomezana hery azy ireo amin'ny tena dikany, ary ny hery toy izany dia hijanona miaraka amin'izy ireo mandritra ny fiainana. Izany no maha-zava-dehibe ny Kolontsain'ny fandriam-pahalemana. Tsy zavatra vonjimaika toy ny famahana fifanolanana amin'ny faritra iray na eo amin'ny fiarahamonina tsy misy fanovana sy fanomezana hery ny olona hitandroana ny fandriam-pahalemana.
Avelao izahay-eny, isika rehetra-raiso ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana ho tombontsoan'ny olombelona, ​​ho an'ny faharetan'ny planetantsika ary hahatonga ny tontolontsika ho toerana honenana tsara kokoa.
# kolontsain'ny fandriam-pahalemana
“Arzantina: mitarika tetika nasionaly ho an'ny fampianarana tontolo iainana feno ny mpampianatra.”
Vehivavy Afghana miantso vehivavy amerikana ho firaisankina
Manana andraikitra lehibe ny tanora amin'ny famongorana ny fitaovam-piadiana nokleary
Aogositra 11, 2020 Vaovao sy hevi-dehibe, Mifantoka ny tanora 0
Ny fitaovam-piadiana niokleary dia mbola iray amin'ireo loza mitatao indrindra amin'ny zanak'olombelona, ​​ary mitombo ny loza. Ny tanora dia afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny fiantohana fa voafafa indray mandeha izy ireo, hoy ny tompon'andraikitra ambony misahana ny fitaovam-piadiana ao amin'ny Firenena Mikambana, mialoha ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora amin'ny 12 aogositra. [tohizo ny famakiana…]
Angola hampiantrano ny kolontsaina fandriam-pahalemana any Afrika mandritra ny roa taona
Novambra 24, 2015 Vaovao sy hevi-dehibe 0
(Lahatsoratra tany am-boalohany: Agencia Angola Press, 7 nov. 2015) Luanda - Ny minisitry ny fampianarana ambony, Adão do Nascimento, dia nanambara tamin'ny solontenan'ny firenena mpikambana ao amin'ny UNESCO fa hanao izany Angola [tohizo ny famakiana…]
Fampiroboroboana ny hetsika ho an'ny tanora SD SDG (Internship)
Janoary 18, 2017 Jobs 0
Ny UN SDG Action Campaign, fandraisana andraikitra manokana an'ny Sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana, dia mitady hanakaramana mpianatra ho mpisolovava tanora. Fe-potoana fampiharana: 20 Janoary. [tohizo ny famakiana…]